watchOS 5 ayaa u oggolaan doonta barnaamijyada Podcasts ee loogu talagalay Apple Watch | Wararka IPhone
Apple waxay ku dhawaaqday in watchOS 5 ay ugu dambayntiina ku dari doonto codsi hooyo oo loogu talagalay podcasts. Ugu dambayntii waxaan haysan doonnaa codsi aan ku dhegeysanno barnaamijyada 'Podcasts' ee ka socda Apple Watch-keena iyada oo aan loo baahnayn in aan qaadanno iPhone-keena. Laakiin tani maahan dhammaantood, maaddaama watchOS 5 ay ugu dambeyntii u oggolaan doonto codsiyada dhinac saddexaad ee isla ujeeddadaas.
Looma baahna codsiyo aan dhammeystirnayn oo si ka yar ama ka yar oo caqli-gal ah noo oggolaaday inaan waafajino barnaamijyadayada 'ama ka xakameyno Apple Watch. Waxaan haysan doonnaa codsiyo dhammaystiran, ama halkii, aan dhammaystirnaynMaxaa yeelay, waxaas oo dhaldhalaala oo dhammi dahab ma aha. Isku-darka boodhadhka 'Apple Watch' waxay lahaan doontaa daabacaaddeeda yar, waanan kuu sharxi doonaa xagga hoose. .
Ka soo horjeedka waxa ku dhaca macruufka, halkaas oo buugaagta codsiyada ee dhageysiga boodhadhku aan dhammaad lahayn, watchOS kuma riyaaqin mudnaankan, qayb weyn oo ka mid ah xaddidaadda weyn ee ay Apple soo rogtay awgeed. Cunsurka aasaasiga ah ee beddeli doona xaqiiqadan wuxuu noqon doonaa awoodda lagu ciyaaro codka asalka, wax la yimaada watchOS 5 isla markaana siin doona horumariyeyaasha awood ay ku abuurtaan barnaamijyo si buuxda u shaqeeya oo ka socda Apple Watch. Waxaad ku keydin kartaa dhacdooyinkaaga Apple Watch oo aad ku dhagaysan kartaa adiga sameecadaha dhagaha ee Bluetooth.
Laakiin waxaa jiri doona wax aan hadda la qaban karin: ka soo qulqulka Apple Watch. Ma awoodi doontid inaad adeegsato WiFi ama LTE isku xirnaanta Apple Watch-kaaga si aad u awoodo inaad doorato dhacdooyinka aad rabto inaad dhageysato intaad socoto, adigoon marka hore kala soo bixi kaydinta gudaha ee saacadda. Tan tan waa inaan ku darnaa faahfaahin kale oo muhiim ah, waana taas in la waafajiyo barnaamijyada 'Podcasts' iyo 'Apple Watch' ee laga soo qaato arjiga hooyo ee Podcasts saacaddu waxay u baahan tahay in la soo dalaco, sidaas darteed isla sidaas ayaa hubaal ugu dhici doonta codsiyada dhinac saddexaad. Sidaa darteed, ma awoodi doontid inaad ku soo dejiso podcast saacaddaada markasta oo aad rabto, kaliya marka ay ku jirto saldhiggeeda lacag-bixinta iyo muddo dheer, maaddaama hannaanka is-waafajinta uusan ahayn mid aad u dhakhso badan. Laakiin ma ahan bilow xun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » watchOS 5 ayaa u oggolaan doonta barnaamijyada Podcasts ee Apple Watch
"Ku Soo Dhawaada HomePod" Ayaa Ku Guuleystay Abaalmarin Ganacsi Oo Ugu Fiican